श्रीमतीलाई यौ; नसम्प र्कका लागि आकर्षित गर्ने पाँच तरिका – Jagaran Nepal
श्रीमतीलाई यौ; नसम्प र्कका लागि आकर्षित गर्ने पाँच तरिका
हुन त हाम्रो समाजमा श्रीमान् श्रीमतीबीच अनिवार्य स म्पर्क हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । उनीहरुले स हवा स गर्न कुनै पनि मेहनत गर्नुपर्दैन । जब सम्भो ग गर्न मन लाग्छ गर्न पाइन्छ भन्ने सोच पनि नभएको होइन । झन हि न्दूधर्ममा त श्रीमान् श्रीमतीबीच सृ ष्टिको निरन्तरता गर्नलाई यौ नसम्प र्क अनिवार्य भनिएको छ ।
तर सम्प र्कलाई केवल सृ ष्टि निरन्तरता गर्ने हिसावले आधुनिक युगमा लिन छाडिएको छ । नलाई प्रेम आनन्द र जीवनशैलीको रुपमा हेर्न थालिएको छ । जब र्जस्ती नसम्पर्क गर्दा सम्बन्धमा खल्लोपना आउने तथा एक अर्कासँग समय बिताउन मन नलाग्ने पनि हुनसक्छ । आजभोलि त श्रीमानले श्रीमतीको इच्छा विपरीत हुने सम्भो गलाई वैवाहिक ब ला त्का र भनेर नाम समेत दिइएको छ । श्रीमती ब लात्का रीको आरोपबाट जोगिन र सम्भावित ब ला;त्का र हुनबाट जोगिन यी उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
१. स कारात्मक प्रतिक्रिया गर्न थाल्नुहोस्
श्रीमतीलाई सँधै गाली गरिरहनु हुन्छ वा उनलाई कमजोर वा केही नजान्ने भनेर भनिरहनुहुन्छ भने तपाईंप्रति तपाईंकी श्रीमतीको आकर्षण घट्दै जाने सम्भावना हुन्छ र आर्कषण घट्दै जानुको कारण स म्प र्कमा मन जान छाड्छ । त्यसैले उनको तारिफ गर्नुस् । उनी हरेक कुराहरु तपाईंभन्दा राम्रोसँग गर्न सक्दिनन् भन्ने भावना मनबाट निकाल्नुहोस् ।
२. घरको काममा ध्यान दिनुहोस्
तपाईं यो सो सोच्न छाडिदिनुहोस् की घरको काम गर्ने जिम्मेवारी श्री मतीको मात्र हो भनेर । अचेल कामकाजी महिलाहरुलाई घर तथा कार्यालयको वातावरण मिलाउन हम्मे हम्मे परेको हुन्छ। अझ सानो बच्चा पनि छ भने उनको दिमागबाट त आफै हराएर जान्छ । किनकी यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण उनको जिन्दगीमा बच्चा, खानापिना र कार्यालयको काम हुने गर्दछ । त्यसकारण यदि तपाईं उनीसँग यी सवै कामको बाबजुद पनि सम्प र्कका लागि समय निकालिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने घरको काममा हात लगाउने बी लगाउनु होस् ।
भान्सामा तरकारी काट्ने, खाना पकाउन सघाउने, सरसफाइमा सघाउने जस्ता काम गर्दा तपाईंप्रति उनको अगा ढप्रेम स्वतः बढ्छ । बच्चालाई खान खुवाउने, फोहोर गरेको छ भने सफा गरिदिने गर्न थाल्नु भयो भने महिलाहरु तपाईंसँग आकर्षित भइरहन्छन् । यस्ता पुरुषलाई महिलाहरुले आदर्श पुरुषको रुपमा सम्मान गर्दछन् ।
३. अंगालो हाल्न सुरु गर्नुुस्
उनीसँग भेट्दा वा अलग हुँदा अंगालो हाल्ने बानी बसाल्नुस् । ओछ्यानमा आएपछि अलि कसि लो अंगालो हाल्नुहोस् । यसले उनलाई तपाईप्रति आकर्षित गर्दछ । यस्तो पनि हुन सक्छ कि यौन सम्प र्कका लागि उनी आफै सुरुवात गर्न थाल्नेछिन् । यदि उनले आफै शुरु गरिन् भने कहिले पनि मौका नगुमाउनुहोस् । उनको इच्क्षा लाई सम्मान गर्नुहोस् । यसलाई छाडाको संज्ञा नदिनुहोस् ।
४. स म्भो गको अवधीमा जि स्किरहनुहोस वा शरीरलाई एकदमै नजिक राख्नुहोस्
चुपचाप नस म्पर्क गरेको महिलाहरुलाई मन पर्दैन वा एकदमै ब लप्रयोग गरेर शरीरलाई कसेर राख्नाले नका रात्मक प्रभाव दिनसक्छ । त्यसैले मायालु भाषामा जिस्कि नुहोस् । उनको शरीरलाई अनाव श्यक रुपमा पी डा नदिनुहोस् । ओ ठ, छा ती र हातका औंलाहरुलाई उत्सा हित पार्नुहोस् । यसले नस म्पर्कमा थप रो मान्स थप्ने गर्छ । र, यही रोमा न्स प्राप्ति गर्नकै लागि उनलाई तपाईसँग सम्भो गको निम्ति लालायित गराउँछ ।
५. उनको शरीरको ता रीफ गर्नुहोस्
जव सम्पर्क गर्न थाल्नुहुन्छ यो भन्न छाडिदिनु होस् की, तिम्रो स्त न कति झोलिएको ? तिम्रो शरीर किन यति गि लो ? यो कति नराम्रो दाग ? तिमीले म वाहे क अरुसँग सह वास त गरेकी छैनौं नि आदि इत्यादि । यी कुरा ले उनीमा निराशा जगाउँछ । त्यसैले यौ नसम्प र्क झर्किलो बन्दछ ।